इथियोपियामा दुर्घटनापछि बोइङको विमान चीनमा प्रतिबन्ध ! - खबरमञ्च खबरमञ्च
इथियोपियामा दुर्घटनापछि बोइङको विमान चीनमा प्रतिबन्ध !
२७ फागुन, रासस/एएफपी, at 5:57 PM
By खबर मञ्च / March 11, 2019 / Comments Off on इथियोपियामा दुर्घटनापछि बोइङको विमान चीनमा प्रतिबन्ध !
वासिङ्टन । ६ महिनाभित्रै दोस्रो पटक बोइङ ७३७ म्याक्स विमान उड्नासाथ दुर्घटना भएसँगै यसको सुरक्षामाथि प्रश्न चिन्ह उठेको छ । दुबै दुर्घटनामा विमानमा यात्रारत सबै यात्रुको मृत्यु भएको थियो ।
अमेरिकी कम्पनी बोइङको नयाँ मोडेलको यस विमानको प्राविधिक सुरक्षा बारेमा अहिले सर्वत्र प्रश्न उठाउन थालिएको छ ।
पछिल्लो दुर्घटनाका बारेमा महत्वपूर्ण सूचना दिने भनेकै फ्लाइट डाटा र ककपिटमा भएका कुराकानी सङ्ग्रह गर्ने दुईवटा ब्ल्याक बक्स हुन् । यी दुई उपकरणमा सङ्ग्रह हुने सूचनाको विश्लेषण र अध्ययनबाट विमानको प्राविधिक समस्या, पाइलटको गल्ती वा अरु कारणहरु पत्ता लाग्न सक्दछ ।
‘पाइलटले कठिनाइ अनुभव गरेको र फर्कन चाहेको बताएका थिए । उनलाई फर्कने आदेश दिइएको थियो’, इथियोपियन एयरलाइन्सका प्रमुख कार्यकारी टिवोल्डो गेब्रेमारियमले आदिस अबाबामा पत्रकारसँग भने ।
टिल ग्रुपका हवाई विज्ञ रिचार्ड आबुलाफियाले भने, ‘दुबै दुर्घटनाग्रस्त जहाज एकै मोडेलका हुन् । लायन एयर झैं इथियोपियन एयरलाइन्सको विमान पनि उड्नासाथ दुर्घटना भएको देखिन्छ र पाइलटले पनि प्राविधिक समस्या आएको खबर गर्नासाथ दुबै विमान दुर्घटनाग्रस्त भएका छन् । दुबैमा एकै प्रकृतिको समस्या देखियो ।’
चिनिया नागरिक उड्डयन अधिकारीहरुले पनि दुबै ज्यानमारा दुर्घटनाबीच समानता देखिएको बताएका छन् । विमानको सुरक्षामा निश्चिन्त नहुँदासम्म यी मोडेलका विमान उडान रोक्ने निर्णय भएको उनीहरुले बताए ।
बोइङले ७३७ म्याक्स मोडेलका ७६ वटा विमान चिनिया एयरलाइन्सलाई बिक्री गरिसकेको छ भने अरु १०४ वटा विमानका लागि आदेश दिइसकेको छ । विश्वका इन्डोनेसिया समेत अरू कतिपय मुलुकमा पनि बोइङ ७३७ म्याक्स मोडेलका विमान सञ्चालनमा छन् ।
‘अर्को दशकमा बोइङका लागि म्याक्स निकै महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो । सन् २०३२ सम्म कम्पनीका उत्पादनको करिब ६४ प्रतिशत हिस्सा यही मोडेलको हुनेछ,’ बजार विश्लेषक मिसेल मार्लुजीले भने ‘विश्वको यातायात र व्यापारका लागि यो अत्यावश्यक साधन हो ।’
बोइङले इथियोपियन एयरलाइन्स दुर्घटनाबाट आफूहरु अति दुःखी भएको जनाएको छ । अनुसन्धानकर्ताहरुलाई बोइङका प्राविधिकहरुले पूर्ण सहयोग गर्ने पनि बोइङको भनाइ छ ।
बोइङ ७३७ म्याक्स तत्काल नउडाउनू : चिनियाँ अधिकारी
Last Modified: March 11, 2019 @ 5:57 pm
१ सय ४९ जना यात्रु बोकेको इथियोपियन एयरलाइन्सको यात्रुवाहक विमान दुर्घटनाग्रस्त
न्यूजिल्यान्डको क्राइस्टचर्चस्थित दुई मस्जिदमा बन्दुकधारीको आक्रमण, ४० जनाको मृत्यु